Bilowgii Hanti-wadaaga - Land Of Punt
Dagaalkii koobad iyo kii labaad ee dunidu kuhoobatay udhaceen siiba waxbadan ayaa caalamka iska badalay. Kooxda majaraha caalamka uhaysa ee saldhigodu yahay wadamada horumarka casrigaa gaadhay ayaa intaan labadan dagaal dhicin caalmka kuhaystay warshado, iyo qalab waxsoosar (Industrial Revolution 1760-1860) oo dunida inteedakale udhoofin jiray lakinse wakhtiyadii danbe dunida ku qabsaday falsafado. Horumarka casriga ah ee wadamada galbeedka xiga lagu hayey waxaa ku tartamayey laba dhinac oo kasoo kalajeeda waqooyiga yurubta fog, qabaa’il ahaan.
Tartanka udhaxeey qolooyinka saancada ubadan ayaa ahaa mid muruq iyo maskaba laysu maquuninayo oo laysu adeegsanayey hadba xeelada ugu casriyaysan ee midba midkakale ku dhaafayo. Horumarkasta waxaa wehelinayey oo barbarsocday fashil laysu maleegayo. Dagaaladii dunida ka dhacay oo sababteeda lahaayen labadan qolo ee dusheena isku haysta markii dagaalkii foolka foolkahi kasoo dhamaaday hadana bilaabay dagaalkale oo maanka iyo maskaxda layska weeraryo caalamka intiisakale lagu gumaynayo laguna hantiyado dad iyo duunyaba.
Wixii danbeeyey WW2 waxaa bilaabmay in falsafad/idelojiyad laysku maquuniyo oo maanka dadka lajabsado quluubtooda shacabka lala wareego. Dunida horumar casriya iyo qori caaradii lagu haystay waxaa bedalay diblomaasiyad, xisbiyo iyo teknolojiyad inlaysu adeegsado oo cidii intaa lagawaayo tareenka ka hadhidoonto. Hadii dagaal iyo jajuub wax lagu waday iminka waxaa loo guuray dagaalka qabow. Labo falsafadood ama feker oo isdhalay ayaa u xilsaaran dagaalka cusub ee dunida in lagu hago. Waa hanti-goosad (dimoqraadiyad) iyo hanti-wadaaga (shuuciyad).
Siyaasadaha iyo afkaaraha laga dhaxlay dagaalkii labaad dhamaadkiisi waxaa kamid ah Idolojiyada Shuuciga (Communism). Taarikhda aan iskuulada lagu dhigin ee kaaga baan inaad jowi hoose kulasoo baxdid ayaa inoo sheegay in fekerka shuuciyada kudhisan laga aminay in Ruush dunida keenay ayaa tilmaamay inaan ruushka laga aqoon fekerkan lakinse cidkale usoowariday.
Shuuciyadan dunida wareerisay ee xataa Maxamed Siyaad Barre khadka cas dhinacakale ka marisay ilaa iminka dhibkii ay reebtay walijiraan oo xanaftii maankooda aqoonyahanka soomliga raadkeedi walijiro ayaa ah taarikh dadku isweydiin. Taarikhda rasmiga ah ee shuuciyada waxay ka bilaabmatay jeel kuyaal dalka Jabaan (concentration Camp). Askartii ka qaybgashay dagaalkii labaad ee dunida ee maan iyo maskaxba waxyeelo soogaadhen cidwalbana lahaa ayaa lagusoo ururiyey xero ‘camp’ xidhan oo loogu talogalay in maanka iyo maskaxdooda lagu jabsado. Jeelka cidamada guulaystay gacanta kuhayeen ayaa ahaa koob lagu casriya wakhtigaa oo lagu tijaabinayo qaabka dadka maankooda iyo maskooda loo masaxo dabadeedna falsafad cusub loogu shubankaro. Kooxda mashruuca wadatay ayaa ubadnayd yahuud yurub, waxay ku guulaysteen inay askartaa tabaalaysan maskaxdooda iyo maankooda jabsadaan dad cusub oo afkaar khaasa aminsan lagasoo saaro. Waxay mashruuca ku bilaaben askar looma ooyan ah oo badankoodu yihiin shikhsiyaad maal, maan iyo maskaxdu u fiyoobin oo bilaarajo ah waana arinta keenaysa in sifudud ruuxdoda loo maquuniyo loogu in guulaysto jabsado maankooda dabadeedna hawlgalin loodiro.
Askarta maankooda lagusoo carbiyey jeelka Jabaan ee sida gaarka ah loo xushay ayaa gacanta laga geliyey kooxda mashruuca socodsiinta shuuciyada qaabilsanaa oo qaarkood kamid ahaayen curiyaasha manifeestadii shuuciyada ‘communist manifesto’ lagu amray inay la shaqeeyan.
Kacdoonkii lagu riday boqortooyadi Tzars (Jewish Bolshevik Revolution)
1917 ayaa niman uu hogaaminayo Karl Marx (wuxuu ku aasanyahay meel aan sida uga fogayn London) oo uu kujiro Stalin, Lennin iyo Troysky iyo saraakil kale; ciidanka lugta hogaabinayan askartii ahayd hadhaaga dagaalkii labaad (askartii jeelka jabaan) ee badankooda maan xanuun iyo tarooma kasoo gaadhay WW2 unabaahnaa xanaano rasmiya ayaa loogaga faidaystay inay dal dhan afganbiyaan. Ragii looso xambaariyey fekerka shuuciyada lagana soo buuxiyey afkaarta falsafada dunida ku faafidoonta ee hanti-wadaaga ay suuqa iyo xaafada magaaloyinka waa weyn ee ruushka guriguri ugalayey ugdanbaystiina waxay ku guuleysteen inay afgambiyaan boqortooyadii ruushka waxayna laayen dhamaan qoyskii iyo qaraabadii boqorka. Waxay kaloo laayen wadaadadii diinta kiristanka majaraha u haysay iyo cid alaale cidii ay khatar u arkayeenba. 60 million oo qof baa gacantooda ku dhintay nimankaa ideolojiyada jeelka jabaan ku dhex alifay. Ragii awoowayasho iyo aboyaashod mashruuca jeelka jabaan lagusoo carbiyey waxaa kamid ah ninka iska leh shirkada “Som oil expl.” ee bada Soomaliya sahanka kawada.
Shuuciyada waxaa sameeyey koox hadaf fogleh oo doonaya inay caalamka wakhtikasta ka taliyaan oo taarikhkasta iyagu qoraan. Waa koox awod uleh wax alaale waxkasta oo maskax biniadam katimaada hirgalinkara. Waad dad aqoon, maal iyo awood siyaasadeed leh oo hindise miis dushiis lakeenay socodsiinkara. Fekerka shuuciyada iyo demoqradiyadaba waa laba falsafadood oo loogu talogalay hadba dhinac dunida loogu jeediyo dadkana layskaga mashquuliyo. Waa shimbir iyo labadeedi baalal, waa iskumid.
bilowgii shuuciyada bolshevik revolution communism Iluminaatiga iluminati karl Marx shuuciyada ururada hadafka qarsoon leh